ဤနွေရာသီ 2022 အတွက် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
ဤနွေရာသီ 2022 အတွက် လမ်းကြောင်းများ
Alicia tomero | 06/06/2022 10:25 | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 07/06/2022 12:57 | Calzado, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ပုံ, သဘောထားတွေ
ဒီနွေရာသီမှာ ကျွန်တော်တို့မှာ အရမ်းကောင်းတယ်။ အကြော့ဆုံးနှင့် အမိုက်ဆုံး အမျိုးအစား ဒီနှစ် 2022 အဘို့။ နှစ်သိမ့်မှုကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့။ရိုးရှင်းသော တီရှပ်များနှင့် တဖြည်းဖြည်း အသံတိတ်ကာ ရိုးရှင်းသော အရောင်များ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုနှင့် အော်ဂဲနစ်မူရင်းပစ္စည်းများဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် ဤနွေရာသီ 2022 အတွက် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့် အမြဲလိုက်လျောညီထွေရှိနေသည်။
ဤလမ်းတစ်လျှောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် Icons စီးရီးများရှိသည်။ Springfield အတွက် Pedri Gonzalezဤရာသီအတွက်၊ ၎င်းသည် ပြန်လည်အသုံးပြုကုန်ကြမ်းများနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အဝတ်အထည်များနှင့် ရေ၊ စွမ်းအင်နှင့် ဓာတုပစ္စည်းများကို ချွေတာနိုင်စေမည့် နည်းပညာဖြင့် အနာဂတ်တည်ဆောက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ကမ္ဘာမြေကြီး တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး အတွက် ကတိကဝတ်တွေ တိုးလာနေတယ်။
ဒီနွေရာသီရဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းက အားကစားဝတ်စုံတော်တော်များများကို လွှမ်းခြုံထားပြီး ဖြစ်တာကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အရင်ရာသီတွေထက် အများကြီးပိုချောင်တယ်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းများအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် အခြေခံအဝတ်အစားများ. ပုံများကဲ့သို့ပင် မပျက်မကွက် ဖြစ်နိုင်သည်။ ပေါ့ပါးပြီး လေ၀င်လေထွက်ကောင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဖိနပ်အားလုံးရဲ့အထက်ပါ။. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒြပ်စင်တစ်ခုစီ၏ လက္ခဏာရပ်များကို ဖော်ပြသော သေးငယ်သော ကွဲပြားမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည်-
1 ဘာမြူဒါ ဘောင်းဘီတို
ဘောင်းဘီတိုများသည် နွေရာသီတွင် အမြဲအသုံးများသည်။ အရင်ရာသီတုန်းက တိုတိုဘောင်းဘီအတိုလေးတွေနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်၊ ဒီနှစ်မှာ လက်ကျန်ငွေရှာတယ်။. မီးမောင်းထိုးပြကြတယ်။ အရမ်းအိတ်အိတ်ထိုအပိုနှစ်သိမ့်မှုအတွက်၊ ၎င်းတို့ထက်မကျော်လွန်ဘဲ ဒူးအထိအလျားဖြင့်၊
အလောင်းအစားပြုလုပ်သည့် ဖွဲ့စည်းမှု denim ဆန့်ထည်လည်လှီးဘောင်းဘီကို 100% ချည်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ဘောင်းဘီတိုများသည် နိုင်လွန်နှင့် spandex တို့ဖြင့် အလွန်ပေါ့ပါးပါသည်။
ဤနွေရာသီတွင် ကတိသစ္စာပြုသည်။ tank tops ၊ ကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ပိုမိုရဲရင့်သည်။ ဒါပေမယ့် အသစ်ပြန်လည်အသုံးပြုထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ ပုံမှန်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ တီရှပ်တွေကို နှစ်သက်ပါတယ်။ ဟိ အရောင်တွေက အမြဲတမ်းကြားနေပြီး အရမ်းကွဲပြားတယ်၊ ပုံနှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လိုဂိုတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် အရသာအမျိုးမျိုးအတွက် ပြန်လည်ဖန်တီးထားသည်။. ပိုလိုအမျိုးအစား slim fit tပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ အားကစားဆန်ပြီး ကြော့ရှင်းသောအဝတ်အစားကို တင်ပြရန် ဘေးဖယ်ထားမည်မဟုတ်ပါ။
တီရှပ်များ ယေဘူယျ စည်းကမ်းအတိုင်း သူတို့လုပ်မယ်။ အိတ်ကြီးနှင့် အရွယ်အစားကြီးသော အသွင်အပြင်ပိုသက်တောင့်သက်သာနဲ့ စတိုင်လ်ဖန်တီးဖို့၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို အမှတ်အသားပြုသော တီရှပ်များ ဖြစ်သော်လည်း လတ်ဆတ်ပြီး ချောင်ကျသော ပုံသဏ္ဌန်ကို ဖန်တီးရန် စိတ်ကူးဖြစ်သည်။ ပါးလွှာသောစတိုင်။
အစွန်းအထင်းများသည် မည်သည့်စတိုင်လ်အတွက်မဆို အမြဲတမ်း chords များ ပျောက်ဆုံးနေ၍ မရပါ။ ဆန်းသစ်တီထွင်ထားပါသည်။ ပုံမှန် fit နှင့် pique ပစ္စည်းလက်တိုနှင့် kodak အစင်းကော်လာ။ အများစု 100% ချည်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဝါဂွမ်း၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတူ ပိုကောင်းမှို့ကုန်ကြမ်းပြန်လည်အသုံးပြုရန် အဆိုပြုချက်အသစ်။
အပူမကပ်ဘဲ နေ့ရောညပါ အင်္ကျီတွေ ပျောက်မသွားနိုင်ပါဘူး။ သူတို့လိုင်းက သူတို့ကတည်းက ရှိရမယ်။ အထည်သည် လေ၀င်လေထွက်ကောင်းပြီး အော်ဂဲနစ်ချည်ဖြစ်သည်။အလွန်ပါးလွှာသောအထူနှင့်အတူ။ ဤရာသီ၏အရောင်များအလွန် pastel ။
ဘောင်းဘီ ဖြင့် တင်ပြကြသည်။ ပါးလွှာသောပုံစံ အိတ်ငါးလုံးဒီဇိုင်းဖြင့် ချွေးထွက်စေသော အထည်များနှင့် ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်။ အရေးအကြောင်းများ သို့မဟုတ် ဟောင်းနွမ်းသောအသွင်အပြင် ထူးခြားမှုတစ်ခုအနေနှင့်၊ လေဆာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ECO-WAH ဖြင့် ဆေးကြောပါ။
chino ဘောင်းဘီ သူတို့ဟာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတိုင်းမှာ အမြဲရှိနေကြပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ အလွန်စွယ်စုံရတဲ့ ဝတ်ရုံတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်လာကြပါတယ်။ သူတို့အားလုံးနှင့်အတူ ယခုနွေရာသီအတွက် နူးညံ့သောအရောင်များ အပူဒဏ်အလိုက် အထည်များ နှင့် elastic ဖြစ်ခြင်း သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း။
တရုတ်တွေလည်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ တင်ပြတယ်။ ပိတ်ချောထည်ခါးပတ်တွင် ecru ရှုံ့ကြိုးတစ်ခုနှင့် ရှုံ့ကြိုးနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အသေးစိတ် ချည်အသေးစိတ်။ ၎င်းတို့သည် နွေရာသီအစည်းအဝေးများအတွက် အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အငွေ့ပျံသည်။
မလွတ်နိုင်ကြ အပြေးသမားများ၊ ရာသီတိုင်းအတွက် အမြဲတမ်း အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဆွဲကြိုးနှင့် ဆွဲဆန့်ထားသော ချည်မျှင်လက်ပတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ သူတို့ရဲ့ ဒီဇိုင်းက လက်လွတ်မခံဘူး။ ဘေးထွက်ကုန်အိတ်များ၊ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဇစ်ဖြင့် ခါးပတ်တွင် ခလုတ်ပိတ်ပါရှိသည်။
ရှပ်အင်္ကျီများ ဒီနွေရာသီအတွက် သူတို့က လက်ရှည် ချည်သား သို့မဟုတ် ပိတ်ချောဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော်လည်း နှစ်ခုစလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် အပူများများစားစားမရှိဘဲ ၀တ်ဆင်နိုင်သည်။ သူတို့နဲ့ ဒီဇိုင်းဆွဲတယ်။ classic ပုံမှန် fit cutအဖြူရောင်နှင့်လိုက်ဖက်သော အစင်းအရင့်နှင့် နူးညံ့သောအရောင်များ။ ယုံမှားသံသယမရှိဘဲ၊ အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီမှအနက်ရောင်အထိအရောင်အမျိုးမျိုးကိုရှာတွေ့နိုင်ပြီးအများစုသည်သူတို့ကိုဝတ်ရန်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ အားကစားဆန်ပြီး ကြော့ရှင်းသောပုံစံ။
နွေရာသီအတွက် ကျွန်တော်တို့က နည်းလမ်းပေးတယ်။ espadrilles၊ ချည်ထည်နှင့် အများအပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အစိုင်အခဲနှင့် အသံတိတ်အရောင်များ၊ နွေရာသီအဝတ်အစားအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီရန်။ အားကိုးပါ။ ရော်ဘာခြေဖဝါးနှင့် အားဖြည့်ထားသော သဘာဝဂုန်လျှော် ဖိနပ်နှင့် ခြေထောက်ကို ချိန်ညှိရန် ကြိုးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
မြို့ပြဖိနပ် ၎င်းတို့သည် လွဲချော်၍ မရနိုင်ပါ။ အော်ဂဲနစ်ဝါဂွမ်းပစ္စည်းနှင့်အတွင်း၌စီတန်း။ ခြေသည်းများနှင့် ခြေဖနောင့်များကို ရော်ဘာဖြင့် အားဖြည့်ထားသောကြောင့် မြို့ပြဝတ်စုံကို အထင်ကရအသွင်ဆောင်စေသည်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စကိတ်စီးဖိနပ် ပူပြင်းတဲ့နေ့ရက်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖိနပ်တွေထဲက တစ်ခုပါ။ ၎င်းတို့ကို ချည်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အရည်အသွေးမြင့်၊ နောက်ကျောတွင် သားရေအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော အပိုင်းတစ်ခု. ၎င်းတို့တွင် သဘာဝ ဖော့ခြေဖိနပ်နှင့် စိုစွတ်သော ရော်ဘာခြေဖဝါးတို့လည်း ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » ဤနွေရာသီ 2022 အတွက် လမ်းကြောင်းများ
မိန်းမက မင်းကို သဘောကျတာကို ဘယ်လို ဖုံးကွယ်ထားလဲ။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြား ဆွဲဆောင်မှုရှိသော လက္ခဏာများ